China Hd Indoor Small Pixels Pitch Led Display Screen /led module Manufacture and Factory | EYELED
HD Ime ụlọ pere mpe Pitch Peeji Ngosipụta Ngosipụta /modul duziri
Ngwa: Mgbasa ozi n'ime ụlọ n'èzí
Agba: Agba zuru ezu
Size Panel: (W) 256mm*128mm (H)
Nọmba nlereanya: P4-8S
Akụkụ: (W) 256mm*128mm (H)
Ogologo pixel: 4mm
Njupụta Pixel: 62500/ M2
Nhazi pixel: 1R1G1B
Mkpebi pixel: (W) 64*32 (H)
Nkezi ike: 30W
Ike ọkọnọ panel: 6A
Ibu ibu: 0.310kg
Ibu arọ nke kabinet: 18.8kg
P4-8S TV Mgbasa Ozi N'èzí N'èzí zuru Agba Agba Ogwe SMD Ihuenyo Ngosipụta
Ogologo nkwukọrịta <100M
Ogologo ndụ Oge 100000
Gosi agba 4096*4096*4096
Tugharịa ugboro 0 ~ 1920HZ/S
Ụdị mbanye 1/8 Nyocha
Ngwa ịnya ụgbọ ala ICN 2038S
Ihuenyo LED anyị bụ ogo HD niile, ndị ahịa nwere ike mara nke ọma ihe dị na enyo, site n'ebe dị anya ma ọ bụ site na nso.
Ihuenyo okporo ọkụ LED na -ezo aka n'ụdị ihuenyo ngosi LED nke nwere ogwe ọkụ ma yie nke ugbu a
ụlọ ọrụ. Ọ bụkwa aha ọzọ maka ihuenyo mmanya ọkụ. Maka ụdị ya enweghị oghere, usoro ụgbụ, yabụ ndị mmadụ na ụlọ ọrụ na -akpọ ya ihuenyo enyo, enyo oghere na ihe ndị ọzọ. A na-ejikarị ihuenyo grille LED na mgbidi dị n'èzí, mgbidi ákwà mgbochi iko, elu ụlọ, ma tinyekwara egbe ala dị elu nwere akụkụ atọ, bọọdụ kọlụm, mgbidi ákwà mgbochi LED na ihe ndị ọzọ. Ngosipụta afọ nke ihuenyo grille LED na-akụda site na njedebe nke ngosi ọkụ ọdịnala LED maka ụlọ na mgbidi, na-eme ka injinịa na-agbanwe ma na-ahọrọ. A na-eji K-speed n'ọtụtụ mpaghara.
otu onye nwere ike tinye ya, ọ na -ewe naanị 10 sekọnd kwa mita mita, nke ji okpukpu 60 karịa ngwa ọdịnala ihuenyo LED ọgbara ọhụrụ. Maka na ọ bụ ihe eji arụpụta ihe, ọ ga -ewe naanị nkeji 3 maka mmezi kwa mita, ọnụ ahịa nrụpụta nchara na nrụnye dị 70% dị ala karịa LEDs ọdịnala, 80% maka nrụnye ihuenyo akwụkwọ ntuziaka, 75% maka ngwa lọjistik na ụgwọ njem, yana 70. % maka oriri ike.
Ibu nke igbe otu bụ naanị 6 n'arọ nke ọ bụla, nke bụ 75% na -erughị ibu nke ihe ngosi ọkụ LED n'èzí, na ọkpụrụkpụ adịlarị ka 67 mm, nke na -eme ka ihuenyo ahụ dị mfe. Tụkwasị na nke ahụ, nhazi ígwè ya na -atụ naanị kilogram 10 kwa mita square, nke dị 80% dị mfe karịa nhazi nchara nke ihuenyo ihu LED n'èzí.
1. Ire ọkụ na nnukwu ngwaahịa, ike ọla kọpa dị ọcha na eriri rịbọn.
2. SMD 1921 LED enweghị oriọna oriọna nwụrụ anwụ dị elu, ntụkwasị obi dị elu.
3. IC mkpọchi ugboro abụọ, onyonyo ndị doro anya karị.
4. Nwee ume ọhụrụ 1920HZ, nke zuru oke ugbu a maka nkwalite pixel ihuenyo.
5. Nkeonwe nkeonwe, enweghị nkebi enweghị ntụpọ, ịdịgide dị elu, mmetụta ngosi zuru oke.
6.Obere okpomọkụ, ogologo ndụ.
Nke gara aga: P3.91 P4.81mm ihuenyo enyo enyo doro anya Micro transparent led Display Transparent Led Display Screen.
Osote: Ahaziri N'èzí Mgbochi ihuenyo ngosi ihuenyo LED Video Wall
P2 P2.5 P3 P3.91 P4 P5 Ngosipụta Ngosipụta Ngosipụta Ind ...
HD 500 × 500 P4.81 P3.91 Ime ụlọ N'èzí Dugara ...
OTOPYYK TOPCP15-31D Nnukwu Ọkwa N'èzí ...
P4.81 P4 P3.91 P3 Hd Nnukwu Mgbasa Ozi N'èzí.
2020 teknụzụ ọhụụ P3.91led panel pan tra ...
P8 P10 Vidiyo ime ụlọ n'èzí Wall Hd Tv Mgbasa ozi ...